Barcelona oo la diyaar ah labo laacib si ay Arsenal uga soo qaadato Alexandre Lacazette – Gool FM
Byare May 4, 2019
(Europe) 04 Maajo 2019. Maamulka sare ee kooxda Barcelona ayaa weli baadi goob xoogan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen weeraryahan ay ku lamaaniyaan Lionel Messi iyo Luis Sarez, dhaliyaha Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaan weli u ah bartilmaameedkooda koowaad.
Kaddib markii uu laacibka reer France diiday inuu ku soo biiro Nou Camp, Barcelona ayaa iminka bilowday baadi goobka badelkiisa.
Jariiradda Mundodeportivo ee dalka Spain ayaa qoreysa in Barcelona ay iminka dooqeeda ku darsatay dhaliyaha Arsenal Lacazette.
Wararka ayaa soo jeedinaya in Barca ay Gunners u soo bandhgi karto laacibkeeda qadka dhexe Gomes ee iminka amaahda ku jooga Everton iyo waliba daafaceeda Untiti si ay hoos ugu dhigaan lacagaha 60-ka milyan ee lagu qiimeeyay Lacazette
Saxiixa Gomes ayaa noqon kara mid ay Arsenal soo dhaweyso maadaama uu ka tagayo Aaron Ramsey oo ku biiraya Juventus.
Sidoo kale maamulka Arsenal ayaa eegi kara saxixa Umtiti maadaama uu kooxdoodu ku yartahay dooqa daafaca dhexe.
Labada laacib ay Barca u soo bandhigtay Arsenal waxaa dheer in Lacazette uu saaxiib dhow la yahay agaasimaha ciyaaraha ee Barcelona Erick Abidal oo ay wadaagaan Wakiilka David Venditelli taa oo sahli karta inuu laacibka u soo dhaqaaqo Nou Camp.